Casa Wenner 1 - Naples Centre Chiaia Plebiscito - I-Airbnb
Casa Wenner 1 - Naples Centre Chiaia Plebiscito
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPierfrancesco
ICasa Wenner 1 sisitudiyo esikhulu sepanoramic kwiGulf of Naples.
Ihlaziywe kwaye ifakwe kakuhle, ibekwe kwisakhiwo esihloniphekileyo kwipaki yakudala yaseVilla Wenner, esinye sezona zakhiwo zihle kakhulu eNaples, kwimeko ekhethekileyo yohlobo lwayo, kwisithili saseChiaia, iziko lokwenyani esixekweni, banokukwazi kakuhle kutyelela kunye namava Naples. Yonke into ifikeleleka lula ngeenyawo okanye ngesithuthi sikawonke-wonke.
*** ukuba awufumani bukho, jonga "iwele" CASA WENNER 2 ***
Iimitha ezimbalwa ukusuka e-Piazza del Plebiscito kunye ne-Chiaia lift, kwindawo efanelekileyo yokutyelela iNaples kunye neendawo ezizungezile, kuya kwenzeka ukuba ufike kwichweba ngemizuzu embalwa ngeenyawo, ukutyelela iziqithi zaseCapri, Ischia kunye neProcida, Metro 1 ukuya ukufikelela Station ukusuka apha sePompeii, neHerculaneum, Sorrento, ntshava, Metro 2 ukuya kufika yiPozzuoli kunye Campi Flegrei.
NgeCentral Funicular kwimizuzu eyi-10 uya kuba kwisithili esinezinduli zeVomero, kunye nebhasi yasezidolophini i-140 ukuya eMergellina nasePosillipo, ukuze ujabulele iimbono ezimangalisayo zaseNaples.
Indlu yimizuzu eyi-15 yokuhamba ukusuka kwiDolophu eNdala emangalisayo kunye neNational Archaeological Museum. Ukuthenga kwakho, le ndlu ikwisiphambuka phakathi kwezitrato eziphambili ze-Neapolitan zorhwebo, ngeToledo, ngeChiaia, nge-dei Mille, kunye ne-Piazza dei Martiri entle, igumbi lokuhlala esixekweni.
Ngemizuzu embalwa unokufikelela kwiRoyal Palace, iSan Carlo Theatre, i-Umberto Gallery, ulwandle olunemivalo kunye neendawo zokutyela kunye neCastel dell'Ovo eyaziwayo.
Namkelekile nonke ngaphandle kokwahlulo.
4.97 · Izimvo eziyi-200
I-Naples ibonakaliswe ngokudityaniswa kweendawo ezidumileyo kunye neendawo zexabiso eliphezulu. ICasa Wenner ikwindawo enepanoramic eluhlaza ejonge kwigophe elinokufikelela ukusuka eVia Monte di Dio kufutshane nePiazza del Plebiscito kunye neChiaia. Isithili saseChiaia sesona siseko seso sixeko. Isityebi kwizakhiwo ezihloniphekileyo kunye nezikhumbuzo, kunye neendledlana kunye neendawo ezineempawu, imele iNaples ngokupheleleyo. Ukusuka kwiRoyal Palace ukuya kwiiQuarters zaseSpain, ukusuka eLungomare ukuya eSanta Lucia, ukuya ePiazza dei Martiri kunye neevenkile zayo ezintle, yindawo yokuhlangana yeNeapolitans, ilungele ukuzibona ngokupheleleyo isixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Pierfrancesco
Ndihlala kwisakhiwo! Ndiza kwenza konke okusemandleni am ukukwamkela ngokobuqu kwaye ndiya kuhlala ndikhona kulo naluphi na ulwazi ngexesha lokuhlala kwakho, ndikunika iingcebiso eziluncedo ukuze ube namava esixekweni njengeeNeapolitan zokwenyani!
Ndihlala kwisakhiwo! Ndiza kwenza konke okusemandleni am ukukwamkela ngokobuqu kwaye ndiya kuhlala ndikhona kulo naluphi na ulwazi ngexesha lokuhlala kwakho, ndikunika iingcebiso e…